चिनियाँको लागि हामीलाई भिसा - ALinks
चिनियाँको लागि हामीलाई भिसा
नोभेम्बर 22, 2021 एन्टिका कुमारी संयुक्त राज्य अमेरिका, भिसा
चीनका लागि अमेरिकी मिसनले बुझ्दछ कि धेरै भिसा आवेदकहरूले भिसा आवेदनहरूको लागि प्रशोधन शुल्क तिर्छन्। र तिनीहरू केवल भिसा अपोइन्टमेन्टको लागि निर्धारित हुनको लागि बसिरहेका छन्। आश्वस्त हुनुहोस्, यसै बीचमा, कि अमेरिकी मिशनले तपाईको भुक्तानीको वैधता December१ डिसेम्बर २०२१ सम्म बढाउनेछ। नियमित कन्सुलर अपरेशनको निलम्बनका कारण भिसा अपोइन्टमेन्ट गर्न नसक्ने सबै आवेदकहरूलाई समय तालिका दिन र / वा उपस्थित हुन अनुमति दिन। भिसा अपोइन्टमेन्ट पहिले नै भुक्तान गरिएको शुल्कको साथ। जब हामी सामान्य भिसा अपरेसनमा फर्कने छौं बारेमा अद्यावधिकहरूका लागि, कृपया यो ब्लग निगरानी जारी राख्नुहोस्।
अमेरिकामा दुबै कन्सुलर सुविधाहरू चीनको चेng्गदूका कन्सुलेट जनरललाई अर्को सूचना नभएसम्म निलम्बित गरिएको थियो र सबै अनुसूची भिसा अपुइन्टमेन्टहरू रद्द गरियो। त्यहाँ सेवा जारी नभएसम्म प्रगतिमा रहेका भिसा आवेदनहरू बेइजि,, वाणिज्य दूतावासमा अमेरिका पठाइएको थियो। थप मार्गदर्शनको लागि, कृपया भिसा कल सेन्टरमा सम्पर्क गर्नुहोस्। कुनै पनि आवेदकको लागि जो अहिले अन्तर्वार्ता लिएको छैन तर चेंng्दूमा अपोइन्टमेन्टको लागि एमआरभी भिसा आवेदन शुल्क तिरेको छ भने, कृपया अमेरिकाको बेइजि emb दूतावासमा वा चीनमा रहेको कुनै अन्य अमेरिकी वाणिज्य दूतावासमा अपोइन्टमेन्टको लागि अनलाइन निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।
चिनियाँका लागि अध्ययन भिसा
संयुक्त राज्य अमेरिकाले विदेशी नागरिकहरू जो संयुक्त राज्यमा अध्ययन गर्न आउँदछ स्वीकार गर्दछन्। सबै विद्यार्थी भिसा आवेदकहरूलाई प्रवेशाज्ञा र भिसाका लागि आवेदन दिनु अघि उनीहरूको स्कूल वा कार्यक्रमबाट स्वीकृत हुने अपेक्षा गरिन्छ। शैक्षिक संस्थाहरूले प्रत्येक आवेदकलाई विद्यार्थी भिसाको लागि आवेदन दिँदा पेश गर्न उचित स्वीकृति कागजातहरू प्रदान गर्दछन् जब उनीहरू भर्ना भइसके पछि।
भिसा र योग्यताको विवरण
भिसा एफ -१
यो विद्यार्थीहरूको लागि भिसाको सबैभन्दा प्रचलित फाराम हो। तपाईंलाई F-1 भिसा चाहिन्छ यदि तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिकामा एक मान्यता प्राप्त संस्थानमा शैक्षिक अध्ययनमा भाग लिने छनौट गर्नुहुन्छ, जस्तै मान्यता प्राप्त अमेरिकी कलेज वा विश्वविद्यालय, निजी हाई स्कूल, वा स्वीकृत अंग्रेजी भाषा प्रोग्राम।
भिसा एम -१
तपाईंलाई एम -१ भिसा चाहिन्छ यदि तपाईं अमेरिकी शैक्षिक संस्थामा गैर शैक्षिक वा प्राविधिक अध्ययन वा प्रशिक्षणमा भर्ना गर्न चाहानुहुन्छ भने।
तपाईं यी दुवै भिसा र अध्ययन अवसरहरूको बारेमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा संयुक्त राज्य अमेरिका मा अधिक जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ शिक्षा यूएसए वेबसाइट।
आवेदक लागू गर्न सक्दछ
१२०-दिन नियम: कृपया नोट गर्नुहोस् कि फारम I-120 मा भनिएको सुरु / रिपोर्ट मिति भन्दा अघि एक एफ वा एम भिसा १२० दिन अघि मात्र जारी गर्न सकिन्छ।
-०-दिन नियम: सबै एफ वा एम विद्यार्थी भिसा प्रापकलाई सूचित गर्नुपर्नेछ कि होमल्याण्ड सुरक्षा नियमको विभागले सबै प्रारम्भिक वा सुरूवात गर्ने विद्यार्थीहरू कार्यक्रमको सुरू / रिपोर्ट मिति भन्दा अघि 30० दिन वा कम युएसमा भर्ती हुनुपर्दछ। प्रवेश पोर्टमा प्रवेश अमेरिका प्रवेश गर्ने भिसा धारकहरूलाई यस मिति अघि अस्वीकार गर्न सकिन्छ। अमेरिकाको लागि तपाईंको यात्रा व्यवस्था बनाउँदा, कृपया यस मितिलाई ध्यानपूर्वक याद गर्नुहोस्। कृपया तपाईंको स्कूललाई ​​SEVIS प्रणालीमा कार्यक्रम सुरू मिति अपडेट गर्न भन्नुहोस्। यदि I-20 मा सूचीबद्ध तपाईंको कार्यक्रम सुरू मिति पहिले नै बितिसक्यो वा तपाईं त्यो मिति पूरा गर्न असक्षम हुनुहुनेछ।
कृपया नोट गर्नुहोस् कि १२०- -०-दिनका नियमहरूले जारी विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षा गर्दैन। निरन्तर विद्यार्थीहरूले कुनै पनि समयमा नयाँ भिसाका लागि आवेदन दिन सक्दछन् जबसम्म अमेरिकामा तिनीहरूको स्थितिको संरक्षण गरीन्छ र उनीहरूको सेभिस रेकर्डहरू हालसालै छन्। कुनै पनि समयमा उनीहरूको कक्षा / कार्यक्रम सुरु हुनु अघि, जारी विद्यार्थीहरू अमेरिकामा सामेल हुन सक्छन्
कसरी आवेदनको लागी
चरण १ – चरण १
गैर-आप्रवासी भिसाका लागि इलेक्ट्रोनिक अनुप्रयोग भर्नुहोस् (DS-160) फारम.
चरण २ - चरण २
प्रसंस्करणको शुल्क लिनुहोस् भिसाका लागि शुल्क।
यसमा वेब पृष्ठ, आफ्नो भेट अनुसूची। तपाईंको अपोइन्टमेन्ट अनुसूची गर्न, तपाईंलाई जानकारीका निम्न तीन टुक्रा चाहिन्छ:
भिसाका लागि तपाईको नम्बर।
भिसा शुल्कको तपाईको रसिदबाट रसीद नम्बर। यदि तपाईंलाई यो नम्बर फेला पार्न मद्दत चाहिएमा, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
तपाईंको DS-10 कन्फर्मेसन ट्याबमा दश (१०) अंकको बारकोड संख्या।
तपाइँको भिसा अन्तर्वार्ताको मिति र समयमा दूतावास भ्रमण गर्नुहोस्। यी कुराको लागि तपाईंको अपोइन्टमेन्टको पत्रको स्क्यान गरिएको प्रतिलिपि लिन नबिर्सनुहोस्।
तपाईंको DS-160 पुष्टिकरण पृष्ठ, पछिल्लो छ महिनामा लिएको एक फोटो।
र तपाईंको नयाँ र सबै पुरानो पासपोर्टहरू तपाईंसँगै ल्याउनु पर्छ।
यी कुनै पनि उत्पादनहरू बिना अनुप्रयोगहरूलाई अनुमोदन गरिने छैन।
व्युत्पन्न एफ वा एम भिसा पति / पत्नी र / वा २१ बर्ष भन्दा कम अविवाहित बच्चाहरूको लागि आवश्यक छ। जो अमेरिकामा प्रिन्सिपल भिसा धारकसँग बस्न वा प्रवेश गर्न चाहान्छन् तिनीहरूको प्रवासको अवधिको लागि। F वा M का धारकहरूको अभिभावकको लागि, त्यहाँ कुनै व्युत्पन्न भिसा छैन।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रिंसिपल भिसा धारकसँग बस्न नचाहने परिवारका सदस्यहरू। तर यसको सट्टामा, बिदाको लागि भ्रमण गर्ने योजनाले आगन्तुक (B-2) भिसाका लागि आवेदन दिन सक्नेछ।
जीवनसाथी र आश्रितहरू संयुक्त राज्यमा व्युत्पन्न एफ वा एम भिसामा अपरेट गर्न सक्दैनन्। यदि तपाईंको पति / पत्नी / बच्चाले रोजगार खोज्छ भने पति या पत्नीले आवश्यक काम भिसा प्राप्त गर्नै पर्दछ।
आश्रितहरूको लागि मद्दतको कागजातहरू
आश्रितहरू सहित आवेदकहरूले पनि प्रदान गर्न अपेक्षा गरिन्छ:
विद्यार्थीको लिंकको प्रमाण (उदाहरणका लागि विवाह र जन्म प्रमाणपत्रहरू) उनीहरूको पति / पत्नी र / वा बच्चालाई।
परिवारहरूले एकै समयमा आफ्नो भिसाका लागि आवेदन दिनुपर्दछ। तर यदि पति / पत्नी र / वा बच्चा पछि एक फरक समय मा लागू गर्न छ। तिनीहरूले विद्यार्थी भिसा होल्डरको राहदानी र भिसाको प्रतिलिपि साथै सबै अन्य आवश्यक कागजातहरू पनि ल्याउनुपर्नेछ।
विद्यार्थी भिसा मान्यता एक रिसर्च ब्रेक पछि
तल वर्णन गरिए अनुसार, बिद्यार्थीहरु जो months महिना भन्दा बढि कक्षाबाट टाढा छन् यसका लागि आवेदन गर्नु पर्छ। र नयाँ एफ -१ वा एम -१ छात्र भिसा प्राप्त गर्नुहोस् विदेशमा यात्रा गरे पछि विद्यालय फर्कन।
संयुक्त राज्य अमेरिका भित्र, विद्यार्थीहरू।
एक विद्यार्थी (F-1 वा M-1) त्यो स्थिति गुमाउन सक्दछ यदि, आप्रवासन कानून अन्तर्गत, तिनीहरूले स्कूलको संक्रमणको पाँच महिना भित्र अध्ययन पुनः शुरू गरेन भने। यदि कुनै विद्यार्थीले नागरिकता गुमाए भने, विद्यार्थीको एफ वा एम भिसा पनि संयुक्त राज्य अमेरिका फिर्ता हुन अमान्य हुनेछ जब सम्म यूएससीआईएसले विद्यार्थीको नागरिकता बहाल गर्दैन। अधिक विवरणको लागि, युएससीआईएस वेबसाइट र गैर-आप्रवासी स्थिति फाराम I-539 को विस्तार / परिवर्तनको लागि आवेदनमा स्थिति पुनःस्थापित गर्न अनुरोधको लागि निर्देशनहरू हेर्नुहोस्।
विद्यार्थी-यात्रा प्रवासी र संयुक्त राज्य अमेरिका फिर्ता
यदि विदेशमा उनीहरूको गतिविधिहरू उनीहरूको अध्ययन कोर्ससँग जोडिएको छ भने, जसले पाँच महिना वा सो भन्दा अधिकको अध्ययन ब्रेकको लागि संयुक्त राज्य अमेरिका छोड्ने विद्यार्थीहरूले उनीहरूको एफ -१ वा एम -१ स्थिति गुमाउन सक्छन्। यदि विद्यार्थीहरूको व्यवहार उनीहरूको अध्ययन कोर्ससँग प्रासंगिक छ कि छैन भनेर श is्का लाग्छ भने विद्यार्थीहरूले उनीहरूको नियुक्त स्कूल अधिकारीहरूसँग यात्राको अग्रिम सल्लाह लिने छन्।
जब संयुक्त राज्य बाहिर र पाँच महिना भन्दा बढी विद्यार्थीको स्थिति बाहिर एक फिर्ती विद्यार्थी कस्टम्स एन्ड बोर्डर प्रोटेक्शन (CBP) इमिग्रेशन इन्स्पेक्टरको अगाडि पहिले प्रयोग गरिएको, अनपेक्षित F-1 वा M-1 भिसा प्रस्तुत गर्दछ। प्रविष्टि, एक CBP इमिग्रेशन निरीक्षक एक वैध गैर आप्रवासी भिसा नभएको लागि विद्यार्थी inadmissible पाउन सक्नुहुन्छ। भर्नाको लागि आवेदन फिर्ता लिन विद्यार्थीलाई अनुमति दिए पछि, सीबीपीले भिसा रद्द पनि गर्न सक्दछ। यसैले विद्यार्थीहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिका सर्नु भन्दा पहिले विदेशमा दूतावास वा कन्सुलेट-जनरलमा नयाँ भिसाका लागि आवेदन दिन months महिना भन्दा बढीको अनुपस्थिति पछि उनीहरूको अध्ययनमा फर्कनु हुँदैन।
Chineses को लागि हामीलाई भिसा
भारतीयहरूको लागि ह Hongक Kong भिसा
अक्टोबर 21, 2020
मेक्सिकोको भिसाका लागि कसरी आवेदन दिने? एक छोटो गाईड
साउदी अरेबिया पर्यटक भिसा
अफगानिस्तान बाट भारत को लागी ई भिसा: ई-आपतकालीन X-Misc भिसा
भारतीयहरूले रूसी भिसा कसरी पाउने छन्?
भारतीयहरूको लागि भियतनाम भिसा
डेनमार्क जाँदै, भिसा अनुप्रयोगहरूको लागि यहाँ आवश्यकताहरू छन्